Iifonti zasimahla zokuzisebenzisa kunye nokonwaba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Esinye sezona zixhobo zifunwayo emva zoyilo lwegraphic zezi iifonti zasimahla. Sonke siyawazi amandla okusebenzisa omnye umthombo okanye omnye, onika ubuntu kuyilo oluthile lokuluhlula kwabanye. Kungenxa yoko le nto kwiCreativos kwi-Intanethi sipapasha amaxesha ngamaxesha ezinye enye iposti eneefonti zasimahla ukuze ukhuphele.
Ukulandela uza kufumana Iifonti ezi-10 zamahala zahluke kakhulu komnye nomnye: ezinzulu, ezinzima, ezilula, ezingaqhelekanga, ezangoku, ezindala ... Zonwabele.
Iifonti zasimahla ezili-10
uMgqibeloIfonti ye-sans-serif enobunzima kwaye ukusetyenziswa kwayo kukhululeke ngokupheleleyo, kokubini kwimisebenzi yobuqu kunye neyorhwebo. Uhlobo lokuchwetheza lubandakanya ii-ligature, imo yesiqhelo kunye ne-italic, kunye nee-glyphs.
BrigUhlobo lokuchwetheza, njengolo lwangaphambili, lusebenza kakuhle kwizihloko kunye nemibhalo emifutshane kakhulu yeeposta. Idibanisa iintlobo ezimbini: "eqhelekileyo" kunye "nenye".
Ingqiqo-Sans-serif typeface efanelekileyo kwimixholwana okanye kwisicatshulwa esingacwangciswanga.
Imvelaphi: Uhlobo lokuchwetheza luphefumlelwe, ewe, zombini kwi-origami kunye neetangram, apho inani elisisiseko li-octagon. Yindlela efanelekileyo yokusebenzisa ubungakanani obukhulu kwaye kakhulu, izicatshulwa ezimfutshane kakhulu.
Isithembiso: Olu hlobo lochazo lwenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwimisebenzi intsimi yayo kwezemidlalo.
Utyatyambo lobuchophoIfonti enelayisensi esivumela ukuba siyisebenzisele ukuzisebenzisela kuphela. Ukusetyenziselwa urhwebo, kufuneka sinxibelelane Nxibelelana nomyili.
Abraham LincolnUphefumlelwe nguMongameli wase-16 wase-US kunye nezibhengezo ze-1800s, olu luhlobo lobuntu obunobume obunomahluko ophakathi. Ukuyikhuphela, kufuneka singenise isixa semali kwindawo elungileyo yephepha (enokuthi isuke kwi- € 0 iye kuthi ga ngokonqwenelekayo) kwaye ucofe khuphela.
Adams Rhoqo: yasimahla ekusebenziseni ubuqu kunye nokuthengisa, luhlobo lochwethezo olunobuntu obuninzi kwaye kuyacetyiswa ukuba busetyenziswe kubungakanani obukhulu.
Kuninzi: ukuhlawula nge-tweet, sinokuba nale fonti yasimahla ukuba isetyenziselwe umntu. Ukuba sifuna ukuyisebenzisa kwintengiso, kuya kwanela ukuthenga ilayisensi nge- € 10 kuphela.
Imizuzu emihlanuUhlobo lokuchwetheza olufanelekileyo lwemizobo, iicomic kunye neetekisi ezingekho sesikweni. Kuyacetyiswa ukuba ufunde ubungakanani bayo ubuncinci ukuze ifundeke kakuhle, kuba ilahlekelwa bubukhali ezikalini ezincinci.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iifonti eziSimahla ezi-5 (VI), Iifonti eziSimahla ezi-5 (III),
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla ezili-10 zokusebenzisa kunye nokonwaba
Ngaba ilungile kakhulu